China ngokuthe ngqo Ukufunda Brinell Ukuqina Tester HBS-3000 mveliso kunye nabenzi | UKAIRDA
Ukufunda ngokuthe ngqo kweBrinell Hardness Tester HBS-3000
Ukufunda ngokuthe ngqo i-Brinell Hardness Tester HBS-3000 sisakhiwo esichanekileyo somatshini kunye nolawulo lomatshini omncinci ovaliweyo-we-loop weemveliso ze-mechatronics, i-HBS-3000 isebenza kwinkqubo yokusebenza kunye novavanyo lwamashishini okuvelisa, iikholeji kunye namaziko enzululwazi. Uphawu oluphambili • Ukulayishwa kwe-loop evaliweyo kunye nenkqubo yolawulo lwe-elektroniki yamkelwe. Inkqubo ye-Photoelectric sensing, kunye namanqanaba ali-10 ovavanyo lwamandla. Ngokufaka igalelo lesitshixo esithambileyo, uguquko phakathi kwendlela yovavanyo kunye nezahlukeneyo ...
Ukufunda ngokuthe ngqo i-Brinell Hardness Tester HBS-3000 sisakhiwo esichanekileyo somatshini kunye nolawulo lomatshini omncinci ovaliweyo-we-loop weemveliso ze-mechatronics, i-HBS-3000 isebenza kwinkqubo yokusebenza kunye novavanyo lwamashishini okuvelisa, iikholeji kunye namaziko enzululwazi.
• Ukulayishwa kwe-loop evaliweyo kunye nenkqubo yolawulo lwe-elektroniki yamkelwe.
• Inkqubo yokujonga iifoto, ngamanqanaba ali-10 ovavanyo lwamandla.
• Ngokufaka igalelo elithambileyo, ukuguqulwa phakathi kwendlela yovavanyo kunye nobunzima obahlukeneyo kunokukhethwa.
• Idatha yenkqubo yokusebenza kunye nesiphumo sovavanyo sinokuboniswa kwiscreen seLCD.
• Idatha yeziphumo zovavanyo zinokukhutshwa ngomshicileli.
• Yitshintshe ngesandla intloko yoxinzelelo kunye neelensi zenjongo.
Inani elipheleleyo lovavanyo 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 125kgf (1226N), 187.5kgf (1839N), 250kgf 250kgf (2452N), 500kgf (4903N), 750kgf (7355N), 1000kgf (8907N), 1500kgf 1500kgf (14710N) ， 3000kgf (29420N)
Uluhlu lokuQiniseka kovavanyo 8 - 650 HBW
Ukuphucula umyinge weMicroscope 20 ×
Ixesha lexesha Ngama-50 ~ 60S
Ubuncinci bokuthweswa isidanga kweDrum yokulinganisa 0.625μm
Ubuninzi bobude beSampuli 220 mm
Umgama phakathi kweZiko lokungena kunye nekholamu 145 mm
Ukunikezwa Amandla AC 220V / 50Hz
Ubungakanani beTester (L × W × H) 550 × 250 × 780mm
Ubunzima obupheleleyo boMvavanyi 123 kg
Enkulu, ephakathi, kunye netafile yovavanyo emiliswe ngo-V
Isixhobo esinganyanzelekanga se-alloy indenter
Uvavanyo oluqhelekileyo lwe-HBW / 3000/10 (150 ～ 250) HBW / 1000/10 (75 ～ 125)HBW / 187.5 / 2.5 (150 ～ 250)
Isatifikethi, ikhadi lewaranti
Iindidi zabavavanyi bokuqina
Uvavanyo lobulukhuni yenye yeendlela zokuvavanya ezilula kuvavanyo lwepropathi. xa uvavanyo lobulukhuni endaweni yovavanyo lwepropathi, kufuneka uguquko oluchanekileyo phakathi kobunzima namandla.
1.Leeb Hardness Tester Yenzelwe ngokwemigaqo yakutshanje yovavanyo lwe-Leeb Hardness kusetyenziswa ubuchwepheshe be-microprocessor obuphambili.
2. Ubulukhuni bukaBrinell (HB) ubungakanani obuthile (ubukhulu buqhele ukuba yi-10mm) yebhola yentsimbi eyomeleleyo icinezelwe kumphezulu wezinto ngomthwalo othile (ngokubanzi i-3000kg) kwaye igcinwe kangangexesha elithile. Emva kokukothula, umlinganiselo womthwalo kwindawo ye-induction lixabiso lobunzima be-brinell (HB), kwaye iyunithi ngamandla ekhilogram / mm2 (N / mm2).
3.Ukuqina kwe-Rockwell (HR) xa i-HB> 450 okanye isampulu incinci kakhulu, uvavanyo lwe-brinell lukhuni alunakusetyenziswa kodwa i-rockwell hardness measurement.ISEBENZISA ikhowuni yedayimane ene-Angle ephezulu ye-120 ° okanye ibhola yentsimbi enobubanzi I-1.59 kunye ne-3.18mm ukucofa kumphezulu wezinto ezilinganisiweyo phantsi komthwalo othile, kwaye ubunzima bezinto zibalwa ukusuka kubunzulu be-induction.Zintathu izikali ngokobunzima bezinto zovavanyo
4. I-HRA: Kukuba lukhuni okufunyanwa ngokusebenzisa umthwalo we-60kg kunye ne-drill cone presser. Isetyenziselwa izinto ezinzima kakhulu (ezinjenge-alloy enzima).
5. I-HRB: Ubulukhuni bufunyanwa ngokusebenzisa umthwalo we-100kg kunye ne-1.58mm ububanzi yintsimbi ebuntsimbi. Isetyenziselwa izinto ezinobulukhuni obuphantsi (njenge-annealed steel, iron cast, njl.).
6. I-HRC: Bubunzima obufunyenwe ngumthwalo we-150kg kunye ne-drill-cone presser. Isetyenziselwa izinto ezilukhuni kakhulu (ezinje ngentsimbi eqinileyo.
7. Ubulukhuni beVickers (HV) ibalwa ngokucinezela kumphezulu wezinto kunye nomthwalo ongaphantsi kwe-120kg kunye nedayimani yesikwere sedayimane esine-Angle ephezulu ye-136 °. Emva koko, ixabiso lomthwalo lahlulwe ngumphezulu wemingxunya yokungena.
Ukuvavanywa kobunzima beWebster (HW)
Kufanelekile ukulinganisa ubunzima beemveliso zealuminium.
Egqithileyo Umbane wangaphandle weRockwell Hardness Tester HRM-45DT
Okulandelayo: I-Electronic Brinell Hardness Tester I-HBE-3000A